'Hopscotch' kaCortázar, phakathi kwezincwadi ezinzima kakhulu ukufunda | Izincwadi Zamanje
'I-Hopscotch' kaCortázar, phakathi kwezincwadi ezinzima kakhulu ukuzifunda
UJulio Cortázar ungomunye wababhali abanekhono elikhulu lekhulu lama-XNUMX. Isithombe sakhe, esifana nesikaRoberto Bolaño, sesivele siyisithonjana semibhalo yaseSpain yekhulu lama-XNUMX.
Umnikelo wakhe omkhulu ezincwadini zomhlaba yi Rayuela, Umsebenzi okunzima ukuwuchaza nokuthi iwebhusayithi I-Flavorwire ifake phakathi kwemisebenzi enzima kakhulu yabafundi engama-50.
Ngaphansi kwesihloko Izincwadi ezingama-50 zabafundi abedlulele ikhasi lithatha uhambo ngemisebenzi engamashumi amahlanu okuthi ngezizathu ezahlukahlukene kube yinselelo kubafundi.
Kungaba inani labalingiswa, ubude bencwadi, isitayela sokulandisa, ukugqagqana kwezindaba neziqephu, njll. Bonke abafundi banencwadi eyodwa noma eziningi eziletha inselelo yomuntu siqu.
Ngiyakwazi lokho Rayuela Kuphakathi kokufundwa kwami ​​okukhungathekile. Empeleni anginalutho olumelene nomsebenzi, kepha ngicabanga ukuthi bekungeyona indlela engcono kakhulu yokwenza ihlobo elishisa kakhulu futhi elinomoya ka-2008.
¿Is Rayuela ukufundwa kwabafundi abeqisayo? Engikufundile ngikuthandile, yize kumele ngivume ukuthi izingxenye akhuluma ngazo ngomculo, ikakhulukazi i-jazz, zingenze ngaba yisidina kakhulu. Futhi umusa ngukuthi manje ngifunde leyo ngxenye yento ebukekayo yale ncwadi ukuthi uCortázar ukhombisa konke ukuhlakanipha kwakhe kwezomculo kulawa makhasi. Isipho sabafundi, bathi.
Lokhu kungikhumbuza Izinsika zomhlaba, nguKen Follet, nakulabo bantu abavumile kimi ukuthi bayifundile kepha ukuthi izingxenye lapho umlobi echaza khona isonto lombhishobhi nalolo hlobo lwento, ziyeqe ngqo.
Ngale kwalawo mavesi engiwatholile ngokwami ​​kuyisidina futhi kungasebenziseka (thethelela abalandeli bomsebenzi), Rayuela kuyinto yakudala ukuthatha kalula. Hhayi ngoba ifundeka ngezindlela ezimbili, kepha ngoba kungumsebenzi ojulile futhi ocashile onikeza izindima ezifana nomusho owaziwayo:
Sahamba singasifunanga kodwa sazi ukuthi kuzofanele sihlangane.
Noma isahluko esidumile sesikhombisa, leso sokwanga, ukuzivocavoca okulandiswayo okuyiyona nto efundwayo nehlukaniswayo ezigabeni eziningi zokubhala okudala.
¿Is Rayuela ukufundwa kwabafundi abeqisayo? Ngicabanga ukuthi uma incwadi ithathwa ngesikhathi esifanele, akukho ukufunda okunzima.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Izaziso » 'I-Hopscotch' kaCortázar, phakathi kwezincwadi ezinzima kakhulu ukuzifunda
Incwadi eyangikhanga, isikhashana konke ukufunda okwalandela kwabonakala kulula futhi kuyisicefe. Ngikuqhathanise nokuya epaki nokugibela i-roller coaster kuqala, yonke eminye imidlalo ngemuva kwalokho ayinangqondo!
Okufanayo kwenzeka kimi lapho ngifunda ezinye izindaba zikaCortázar lapho ngisemusha. "Indlu ithathiwe," ngokwesibonelo, ingishaya njengenye yezindaba ezidida kakhulu engake ngazifunda.
Kodwa-ke, njengoba ngikhomba kokuthunyelwe, angikwazanga ukuqeda ukufunda i- "Hopscotch", ngicabanga ukuthi bekungasiso isikhathi esifanele sokuzicwilisa ekufundeni okuthakazelisa kangaka.
Ngiyifunde kabili i-hopscotch, yangixaka, kepha uma ucabanga ngayo futhi uyifunda kabusha, umuntu uyayithanda.Yinhle, ikwenza ucabange.
"Ngaphandle kokubhuka", okusha kukaNoe Casado